आफुभन्दा धेरै कान्छा युवकसँग बिवाह गर्दैछिन् श्वेता ? - ramechhapkhabar.com – ramechhapkhabar.com
दशैंका बेला सार्वजनिक तस्वीर कसको हो ? धेरैको जिज्ञासा छ । प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त तस्वीर धनगढीका विजयेन्द्र रावतको हो । उनका बुबाको फेसबूक आईडी स्नेहाल्ता रावतको प्रोफाइलमा राखिएको तस्वीरमा देखिएकी महिला विजयेन्द्रकी आमा हुन् ।
जन्म दिने आमा, स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठकी आमा र विजयेन्द्रकी आमाको गरी तिन तस्वीर स्वेताले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेपछि स्वेता यी युवकसँग प्रेममा छिन् भन्ने संकेत